पेलेको बाल्यकालदेखिको फुटबल यात्रा, कसरी बने महान् खेलाडी ? - Experience Best News from Nepal
पेलेको बाल्यकालदेखिको फुटबल यात्रा, कसरी बने महान् खेलाडी ?
पेलेलाई फुटबलका सम्राट् मानिन्छ । संसारभरमा पेलेको नामले कहलिएका उनको पुरा नाम हो एडसन एरान्टेन्स डो नासिमेन्टो । सन् १९४० अक्टोबर २३ मा ब्राजिल स्थित एड्सन गाउँको एक गरिब परिवारमा जन्मेका उनी आफ्नो जीवनमा विभिन्न संघर्षका बिच आफ्नो अदभूत खेल कौशलले फुटबल संसारमा प्रख्यात भए।
ब्राजिलले पाँच पटक विश्वकप जितेको छ । पाँच मध्ये तीन उपाधि जिताउने नायक हुन्, पेले । फुटबलका जादुगरको छवि बनाएका पेलेको सफलताको बराबरी आजसम्म कुनै फुटबलरले गर्न सकेको छैन । उनकै प्रेरणामा ब्राजिलले १९५८, १९६२ र १९७० मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो । पेले संसारका एक मात्रै खेलाडी हुन्, जसले तीन विश्वकप जितेको छ ।
यसका साथै सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वकप खेल्ने, गोल गर्ने, ह्याट्रिक गर्ने र फाइनल खेलेको रेकर्ड ६० वर्षसम्म पनि उनकै नाममा छ । ब्राजिलमा मात्रै होइन, संसारभरमा फुटबललाई लोकप्रिय बनाउने पेलेको जीवनी जति चाखलाग्दो छ, उति नै उनको नामको पनि छ ।
उनका पिता क्लब स्तरका खेलाडी थिए, आमा गृहिणी । आमा बुबाले उनको नाम एडिसन राखेका थिए । ‘जुन बेला म जन्मिएको थिएँ, त्यही बेला हाम्रो सहरमा बिजुलीको बल्ब पुगेको थियो । आमा बुबालाई बल्बको उज्यालोको प्रभाव थियो । पेलेका पिता आफैँ फुटबल खेल्थे, तर २५ वर्षमा लागेको चोटका कारण उनको फुटबल करियर क्लब स्तरभन्दा माथि उठ्न सकेन । त्यसैले उनले छोरालाई फुटबलर बनाउने सपना देखे । उनको परिवार साओ पाओलोको बाउरु सहरमा बसाई सर्‍यो ।
सानैदेखि पाएको प्रशिक्षणका कारण उनको चर्चा सडक–सडकमा हुन थालेको थियो । पेले फाटेका कपडाको बल बनाएर फुटबल खेल्थे, भने कहिले नजिकै रहेको गुड्स ट्रेन स्टेसनबाट सामान चोरेर बल किन्न पैसा जम्मा गर्थे ।
९/१० को उमेरमा आफ्ना साथीहरूलाई मज्जाले छक्काउँथे, उनको खुट्टाबाट बल कसैले खोस्न सक्दैन थिए ।
तर, उनको नाम पेले कसरी भयो ? यो विषयमा थुप्रै दाबी गरिएका छन् । गेलिक भाषामा पेलेको अर्थ फुटबल हुन्छ, र उनको नाम पेले भएको मान्नेहरू पनि छन् । तर यो दाबी सत्य होइन, किनकि गेलिक आयरल्यान्ड आसपासको भाषा हो । यो शब्द त्यो जमानामा हजारौँ माइल टाढा ब्राजिलमा कसरी पुग्यो ? यसको ठोस आधार छैन । पेले हिब्रु भाषामा पनि छ, जसको अर्थ चमत्कार हुन्छ । तर नाइजेरियाको यो शब्द त्यो बेला ब्राजिल पुग्न असम्भव थियो । अर्को एक सवाल पनि छ, की पेले कसरी पेले भयो ? त्यो समय ब्राजिलमा पोर्चुगाली भाषा प्रचलित थियो, उक्त भाषामा पेलेको अर्थ नै लाग्दैन ।
यसका बाबजुद जब १५ वर्षको उमेरमा उनी ब्राजिलको चर्चित क्लब सान्टोसमा अनुबन्ध भए, उनको नाम पेले भइसकेको थियो । उनी पेले नाम कसरी रह्यो भन्ने बारेमा चर्चा हुन्छ ।